Mutuashi: bu akwukwo bu egwu na udiri egwu nke sitere na egwu ndi Baluba site na Kasai rue DRC… (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: Ọktoba 24, 2020 00: 10 Enweghị asịsa
N’afọ 1965, Nico Kasanda na Rochereau Tabou wepụtara egwu a kpọrọ Bia ntondi Kasanda (Kasanda, ike gwụrụ m). N'ime egwu a, ha na-akpọ pun metụtara aha ahụ "Kasanda", nwere ntụpọ: “Bia kutondi mbinganyi? Nwaanyị na-ajụ n’abụ a. Na Nico zara, sị: "Si malu a Kasanda". N’abụ ahụ, a na-ebe mkpu otu a kpọrọ “Mutua's, Muendela”. Anyị nwere ike ịtụgharị site na "gbara ya, were ya". Mana ọ dị mkpa ịkọwapụta "Muendela's" bụ okwu dị nro iji kpalite omume mmekọahụ na Tshiluba.
Dị nke oge a bidoro na 1981, na mwepụta nke egwu ahụ Chebele de Tshala Muana. O jiri nway’iru na ure a tradi-nke ugbua Lulua, a na-enyocha ụdị ọ bụla na Democratic Republic of Congo (Zaire) tumadi na ntọhapụ nke Koumba na na 1986 Tshibola n’afọ 1987, bịanyere aka na ya Tshala Muana n’elu egwu emebere, dozie ma rụọ ọrụ nke guitarist-nhazi Souzy Kaseya (sitekwa Kasaï). si n'oge bucha abụrụla otu n'ime ụdị egwu egwu ndị ama ama n'Africa, ọkachasị na Congo. N'adịghị ka rumba, ihe bucha bụkarị abụ n'ime Tshiluba.
Ọkt27 05: 56